လူငယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများ (2017) - Your Brain On Porn
comments: ညစ်ညမ်းသောကလေးငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော 2017 ခုနှစ်“ ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း” တွင်ညစ်ညမ်းမှုနှေးကွေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှု (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ပါ ၀ င်သောယောက်ျားလေးများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများစွာကသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေခြင်း (လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၌အထွdifficulty်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်း) သည်၎င်းတို့၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ YBOP မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့မဆိုအကြံပြုချက်များသုတ်ရည်လွှတ် (DE) သို့မဟုတ် anorgasmia နှောင့်နှေး?
အပြည့်အစုံကိုလေ့လာ PDF ဖိုင်ရယူရန်
ဒစ်ခ်, ခ, အေ Reddy, AT Gabrielson နှင့် WJ Hellstrom ။
int J ကို Med ဗြာ4မရှိ။4(2017): 102-111 ။
စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား: Narrative ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, အထူးသ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ် (PE) နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (DE), အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားအတွက်, ရောဂါများ debilitating နေကြသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆရာဝန်မှတင်ဆက်ထားပါတယ် (အသက်၏ 40 နှစ်အောက်) လူပျိုများအရေအတွက်တိုးလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အစဉ်အလာလူပျိုတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်မလုံခြုံမှုအဖြစ်နောက်ခံ psychogenic အကြောင်းတရားများထဲကနေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတစ်ဦးတင်းကြပ်စွာ psychosomatic ပြဿနာအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ဒီအချို့ကိစ္စများတွင်မှန်ပေမယ့်အသစ် diagnostic tool များနှင့် pharmacotherapy ၏ထွန်းကဤရောဂါများအတွက်အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများ၏ပျံ့နှံ့ယခင်ကထင်ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားကြောင်းထင်ရှားပြီ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုပိုမိုဆိုးရွားသည့်ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအဖြစ် concomitant psychogenic ဖိအားကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အဓိကအားအော်ဂဲနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်အများအပြားလူနာ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုသူတို့ပိုကောင်းတဲ့, နားလည်ဖော်ထုတ်ရန်, ဤကြီးထွားလာလူနာလူဦးရေအစေခံစေခြင်းငှါဒါ Clinician ပညာပေးကူညီနိုင်ရန်အတွက်လုလင်တို့သည်အားဖြင့်ကြုံတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဘုံ etiologies အာရုံစိုက်။
keywords: လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်; Erectile အလုပ်မဖြစ်; အချိန်မတန်မီသုက်; နှောင့်နှေးသုက်; Etiologies
Althof SE, အပ် RB ။ အဆိုပါဆီးရောဂါပါရဂူဘို့စိစစ်နှင့်ကုသမှု: အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ။ Urol Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2011; 38 (2): 141-6 ။ Doi: 10.1016 / j.ucl.2011.02.003 ။ pmid: 21621080 ။
ရိဒ်-Maldonado AB, Lue TF ။ လုလင်တို့သည်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တစ်ဦးက syndrome ရောဂါ? ဘာသာပြန် Androl Urol ။ 2016;5(2): 228-34 ။ Doi: 10.21037 / tau.2016.03.02 ။ pmid: 27141452 ။
McCabe အမတ်, Sharlip ID ကို, Atalla အီး, Balon R ကို, Fisher ကအေဒီ, Laumann အီး, et al ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အဓိပ္ပာယ်: လိင်ဆေးပညာ 2015 အပေါ်စတုတ္ထအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ထံမှသဘောတူညီချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ J ကိုလိင် Med ။ 2016; 13 (2): 135-43 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2015.12.019 ။ pmid: 26953828 ။
Feldman HA, စတိန်းငါ Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB ။ သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol ။ 1994; 151 (1): 54-61 ။ pmid: 8254833 ။
O'Sullivan LF၊ Brotto LA၊ Byers ES၊ Majerovich JA, Wuest JA ။ လိင်မှုကိစ္စအတွေ့အကြုံအလယ်အလတ်မှနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ J Sex Med ။ 2014; 11 (3): 630-41 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12419 ။ pmid: 24418498
Martins အပြည်ပြည်သွား, Abdo CHN ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် 18-40 နှစ်ပေါင်းအသက်ဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင်ဆက်စပ်အချက်များ။ J ကိုလိင် Med ။ 2010;7(6): 2166-73 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.015 42.x ။ pmid: 19889149 ။
Wilcox SL, Redmond က S, ခေါင်းဆောင် Hassan လေး။ ပဏာမခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခန့်မှန်း: စစ်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2014; 11 (10): 2537-45 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12643 ။ pmid: 25042933 ။
Laumann EO, ပိုက်တစ်ဦး, ရို RC ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1999; 281 (6): 537-44 ။ Doi: 10.1001 / jama.281.6.537 ။ pmid: 10022110 ။
Rastrelli, G, မထိုက်မတန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာလူပျိုတို့အတွက်မဂ္ဂီအမ် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ? Translational Andrology နှင့် Urology ။ 2017;6(1): 79-90 ။ Doi: 10.21037 / tau.2016.09.06 ။ pmid: PMC5313296 ။
Caskurlu T က, Tasci AI အ, Resim S က, Sahinkanat T က, Ergenekon အီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ etiology နှင့်တူရကီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်အချက်များပံ့ပိုး။ int J ကို Urol ။ 2004; 11 (7): 525-9 ။ Doi: 10.1111 / j.1442-2042.2004.00837.x ။ pmid: 15242362 ။
Donatucci CF, Lue TF ။ 40 အောက်မှာလူ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: etiology နှင့်ကုသမှုရွေးချယ်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 1993;5(2): 97-103 ။ pmid: 8348217 ။
Ralph: D, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် McNicholas တီဗြိတိန်စီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းညွှန်ချက်များ။ BMJ ။ 2000; 321 (7259): 499-503 ။ pmid: 10948037 ။
Papagiannopoulos: D, Khare N ကို, အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလုလင် Nehra အေအကဲဖြတ်။ Andrology ၏အာရှဂျာနယ်။ 2015; 17 (1): 11-6 ။ Doi: 10.4103 / 1008-682X.139253 ။ pmid: PMC4291852 ။
Fedele: D, Bortolotti တစ်ဦးက, Coscelli ကို C, Santeusanio က F, Chatenoud L ကို, Collis, E, et al ။ အီတလီမှာအမျိုးအစား 1 နှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Gruppo Italiano စတူဒီယို Deficit Erettile nei Diabetici ကိုယ်စားတှငျ။ int J ကို Epidemiol ။ 2000; 29 (3): 524-31 ။ pmid: 10869326 ။
Radicioni AF, Ferlin တစ်ဦးက, Balercia, G, Pasquali: D, Vignozzi L ကို, မဂ္ဂီကို M, et al ။ Klinefelter syndrome ရောဂါ၏ရောဂါနှင့်လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်သဘောတူကြေညာချက်။ J ကို Endocrinol Invest ။ 2010; 33 (11): 839-50 ။ Doi: 10.1007 / BF03350351 ။ pmid: 21293172 ။
ငုယင် HMT, Gabrielson ကို AT, Hellstrom WJG ။ လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်-တစ်ဦးကအဆိုပါပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်အချက်များ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် Erectile အလုပ်မဖြစ်။ လိင် Med ဗျာ 2017;5(4): 508-20 ။ Doi: 10.1016 / j.sxmr.2017.05.004 ။ pmid: 28642047 ။
ပန် L ကို, Xia X ကို, Feng တို့က Y, Jiang ကို C, Cui Y ကို, Huang က Y. အဆိုပါ phytoestrogen daidzein မှလူငယ်ကြွက်များ၏ Exposure လူကြီးတစ်ဦးထိုး-related ထုံးစံ၌ erectile function ကိုချို့ယွင်း။ J ကို Androl ။ 2008; 29 (1): 55-62 ။ Doi: 10.2164 / jandrol.107.003392 ။ pmid: 17673432 ။
Siepmann T က, Roofeh J ကို, Kiefer အက်ဖ်ဒဗလျူ, Edelson DG ။ ပဲပိစပ်ထုတ်ကုန်စားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် Hypogonadism နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ အာဟာရ။ 2011; 27 (7-8): 859-62 ။ Doi: 10.1016 / j.nut.2010.10.018 ။ pmid: 21353476 ။
Sommer က F, စတိန်းငါ Korda JB ။ စက်ဘီးစီးနင်းခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2010;7(7): 2346-58 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01664.x ။ pmid: 20102446 ။
ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအပျော်တမ်းစက်ဘီးစီးအတွက် Andersen ကကေဗွီ, Bovim G. အသင်ျခြိုနှင့်အာရုံကြော entrapment ။ Acta Neurol Scand ။ 1997; 95 (4): 233-40 ။ pmid: 9150814 ။
Michiels M က, ဗန် der Aa အက်ဖ်စက်ဘီးစီးနင်းနှင့်အိပ်ခန်း: တစ်စက်ဘီးအကြောင်းမရှိ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစီးနိုင်သလဲ Urology ။ 2015; 85 (4): 725-30 ။ Doi: 10.1016 / j.urology.2014.12.034 ။ pmid: 25681833 ။
Yao အဘိဓါန်က F, Huang က Y ကို, Zhang က Y ကိုသည် Dong Y ကို, Ma H ကို, Deng ကို C, et al ။ Subclinical endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏အနိမ့်အန္တရာယ်နှင့်အတူလူပျိုတို့အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အနိမ့်တန်းရောင်ရမ်းကစားအခန်းကဏ္ဍ။ int J ကို Androl ။ 2012; 35 (5): 653-9 ။ Doi: 10.1111 / j.1365 -2605.2012.01273.x ။ pmid: 22519624 ။
Balercia, G, Boscaro M က, Lombardo က F, Carosa အီး, Lenzi တစ်ဦးက, Jannini EA ၏။ endocrine ရောဂါများအတွက်လိင်ရောဂါလက္ခဏာတွေ: psychosomatic အမြင်များ။ Psychother Psychosom ။ 2007; 76 (3): 134-40 ။ Doi: 10.1159 / 000099840 ။ pmid: 17426412 ။
Ludwig W က, Phillips ကအမ်အော်ဂဲနစ် 40 အောက်မှာလူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Urol Int ။ 2014; 92 (1): 1-6 ။ Doi: 10.1159 / 000354931 ။ pmid: 24281298 ။
Krassas GE, Tziomalos K ကို Papadopoulou က F, Pontikides N ကို, hyper- နှင့် hypothyroidism နှင့်အတူလူနာအတွက် Perros P. Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ဘယ်လိုဘုံနှင့်ကျွန်တော်ဆကျဆံသငျ့သနညျး J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2008; 93 (5): 1815-9 ။ Doi: 10.1210 / jc.2 007-2259 ။ pmid: 18270255 ။
Keller JJ, Liang YC, လင်း HC ။ မျိုးစုံနဗ်ကြောများနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအစည်းအရုံး: တစ်နိုင်ငံလုံးအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2012;9(7): 1753-9 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02746.x ။ pmid: 22548978 ။
Keller J ကို, ချန် YK, လင်း HC ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအစည်းအရုံး: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုကနေသက်သေအထောက်အထား။ J ကိုလိင် Med ။ 2012;9(9): 2248-55 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02670.x ။ pmid: 22429815 ။
ဆောက်ပုတ် R ကို, Tricoire JL, Rischmann P ကို, Sarramon JP, Puget J ကို, intramedullary femoral လက်သည်းပြီးနောက်ငယ်ရွယ်အထီးလူနာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Malavaud ခမြင့်မားပျံ့နှံ့။ Urology ။ 2005; 65 (3): 559-63 ။ Doi: 10.1016 / j.urology.2004 ။ 10.002 ။ pmid: 15780376 ။
Siddiqui MA, Peng က B, Shanmugam N ကို, Yeo W က, Fook-Chong က S လီ Tat JC, et al ။ lumbar ကျောရိုးရောဂါနှင့်အတူငယ်ရွယ်ခွဲစိတ်ကုသသောလူနာများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တစ်အလားအလာနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ ကျောရိုး (Phila Pa 1976) ။ 2012; 37 (9): 797-801 ။ Doi: 10.1097 / BRS.0b013e318232601c ။ pmid: 21912318 ။
Corona, G, Ricca V ကို, Bandini အီး, Mannucci အီး, Petrone L ကို, Fisher ကအေဒီ, et al ။ စိတ်ရောဂါရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအသင်းမှ။ J ကိုလိင် Med ။ 2008;5(2): 458-68 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2007.00663.x ။ pmid: 18004996 ။
Bandini အီး, Fisher ကအေဒီ, et al Corona, G, Ricca V ကို, Monami M က, Boddi V ကို။ ပြင်းထန်သောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2010;7(10): 3477-86 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2010.019 36.x ။ pmid: 20633210 ။
Smith က JF, Breyer BN, Eisenberg ML, Sharlip ID ကို, Shindel AW ။ အထီးမြောက်အမေရိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ။ J ကိုလိင် Med ။ 2010;7(12): 3909-17 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2010.0203 3.x ။ pmid: 21059174 ။
Mialon တစ်ဦးက, Berchtold တစ်ဦးက, Michaud PA ဆိုပြီး, Gmel, G, Suris JC ။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ: လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2012; 51 (1): 25-31 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2012.01.008 ။ pmid: 22727073 ။
Jern P ကို, Gunst တစ်ဦးက, Sandnabba K ကို Santtila P. လူပျိုတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ်အစောပိုင်းနှင့်လက်ရှိ erectile ပြဿနာများဖြစ်ပါသလား တစ်ဦးကနောက်ကြောင်းပြန် Self-အစီရင်ခံစာလေ့လာမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2012; 38 (4): 349-64 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.665818 ။ pmid: 22712819 ။
Yafi အက်ဖ်အေ, Jenkins L ကို, Albersen M က, Corona, G, Isidori လေး, Goldfarb တို့က S, et al ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ နတ်ဗြာ dis primer ။ 2016; 2: 16003 ။ Doi: 10.1038 / nrdp.2016.3 ။ pmid: 27188339 ။
ဗလတစ်ဦးက, ငုယင် HMT, Hellstrom WJG ။ post-SSRI လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: တစ်ဦးကစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ လိင် Med ဗျာ 2018;6(1): 29-34 ။ Doi: 10.1016 / j.sxmr.2017.07.002 ။ pmid: 28778697 ။
Khanzada ဦး, Khan က SA, Hussain M က, Adel H ကို, Masood K ကို Adil SO, et al ။ ပါကစ္စတန်ရှိ penile Doppler ultrasonography လျှက်လူနာများအတွက် Erectile အလုပ်မဖြစ်၏အကြောင်းရင်းများ၏အကဲဖြတ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Mens ကနျြးမာရေး။ 2017; 35 (1): 22-7 ။ Doi: 10.5534 / wjmh.2017.35.1.22 ။ pmid: 28459144 ။
Gleason JM, Slezak JM, Jung H ကို, Reynolds ကငွေကျပ်, ဗန်တွင်း Eeden SK ကို, Haque R ကို, et al ။ ပုံမှန် nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Urol ။ 2011; 185 (4): 1388-93 ။ Doi: 10.1016 / j.juro.2010.11.092 ။ pmid: 21334642 ။
Kaufman KD, Olsen EA ၏, White: D, Savin R ကို, DeVillez R ကို, Bergfeld W က, et al ။ androgenetic Alopecia နှင့်အတူယောက်ျား၏ကုသမှုအတွက် Finasteride ။ Finasteride အမျိုးသားစံနမူနာဆံပင်ဆုံးရှုံးမှုလေ့လာမှု Group မှ။ J ကို Am Acad Dermatol ။ 1998; 39 (4 Pt 1): 578-89 ။ Doi: https://doi.org/10.1016/S0190-9622(98)70007-6 ။ pmid: 9777765 ။
Civardi ကို C, Collini တစ်ဦးက, Gontero P ကို, မိုနာကိုအက်ဖ် Vasogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု Topiramate-သွေးဆောင်။ Clin Neurol Neurosurg ။ 2012; 114 (1): 70-1 ။ Doi: 10.1016 / j.clineuro.2011 .07.018 ။ pmid: 21868149 ။
Mykoniatis ငါ Grammatikopoulou MG, Bouras အီး, Karampasi အီး, Tsionga တစ်ဦးက, Kogias တစ်ဦးက, et al ။ လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်တွေထဲမှာလိင်အလုပ်မဖြစ်: Erectile အလုပ်မဖြစ်အတူအစားအသောက် Components Associated ၏အကျဉ်းချုပ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2018; 15 (2): 176-82 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2017.12.008 ။ pmid: 29325831 ။
Austoni အီး, Mirone V ကို, Parazzini က F, Fasolo သမဝါယမ, Turchi P ကို, Pescatori ES, et al ။ အဆိုပါ Andrology ကာကွယ်တားဆီးရေးရက်သတ္တပတ် 2001-2002 Andrology ၏အီတလီအသငျး (SIA) ၏လေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကို: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ဆေးလိပ်သောက်။ EUR Urol ။ 2005; 48 (5): 810-7; ဆွေးနွေးမှု 7-8 ။ Doi: 10.1016 / j.eururo.2005.03.005 ။ pmid: 16202509 ။
သူ J ကို, Reynolds က K ကို Chen က J ကို, ချန် CS, Wu က X, Duane X ကို, et al ။ လက်တွေ့သွေးကြောရောဂါမရှိဘဲတရုတ်လူတို့တွင်စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 2007; 166 (7): 803-9 ။ Doi: 10.1093 / aje / kwm154 ။ pmid: 17623 743 ။
Mirone V ကို, Imbimbo ကို C, Bortolotti တစ်ဦးက, Di Cintio အီး, Collis, E, Landoni M က, et al ။ အီတလီ epidemiological လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို: စီးကရက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ဆေးလိပ်။ EUR Urol ။ 2002; 41 (3): 294-7 ။ pmid: 12180231 ။
Millett က C, ဝမ် LM, Rissel ကို C, Smith ကတစ်ဦး, ရစ်ချတာကို J, Grulich တစ်ဦးက, et al ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: သြစတြေးလျယောက်ျားတစ်ဦးကိုယ်စားလှယ်နမူနာကနေတွေ့ရှိချက်။ တောဘထိန်းချုပ်ရေး။ 2006; 15 (2): 136-9 ။ Doi: 10.1136 / tc.2005.015545 ။ pmid: 16565463 ။
Gades မိုင်, Nehra တစ်ဦးက, et al Jacobson DJ သမား, McGree ME, Girman CJ, Rhodes T က။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအစည်းအရုံး: လူဦးရေ-based လေ့လာမှု။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 2005; 161 (4): 346-51 ။ Doi: 10.1093 / aje / kwi052 ။ pmid: 15692 078 ။
ယန် Y ကို, လျူ R ကို, Jiang H ကို, ဟောင်ကောင် K ကို Zhao နှင့် L ကို, တန်ဒဗလျူ, et al ။ သောက်သုံးသောကြိမ်နှုန်းနှင့်လူငယ်တို့အတွက် Sildenafil များ၏ကုသမှုရလဒျနဲ့ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူအလယျပိုငျး-အသက်အမျိုးသားများအကြားတွင်အစည်းအရုံး: တစ်ဦးကတရုတ်, ပေါင်းစုံပါ, စူးစမ်းလေ့လာမှု။ Urology ။ 2015; 86 (1): 62-7 ။ Doi: 10.1016 / j.urology .2015.03.011 ။ pmid: 26142584 ။
ကနေဒီ SH, Dugre H ကို, Defoy ဗြဲတစ်ဦးကပေါင်းစုံပါ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါများတည်းကကုသမှုမရှိဘူးလက္ခဏာတွေနှင့်အတူကနေဒါလူ sildenafil citrate ၏ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု, အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ၏မရှိခြင်း၌တည်၏။ int Clin Psychopharmacol ။ 2011; 26 (3): 151-8 ။ Doi: 10.1097 / YIC.0b013e32834309fc ။ pmid: 21471773 ။
Simonelli ကို C, Tripodi က F, Cosmi V ကို, ရော့စီ R ကို, Fabrizi တစ်ဦးက, Silvaggi ကို C, et al ။ အဘယ်အရာကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ်တစ်ဦးတိုင်ကြားမှုကိုမေးသလဲ? အီတလီတယ်လီဖုန်းအကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု၏ရလဒ်များ။ int J ကို Clin Pract ။ 2010; 64 (3): 360-70 ။ Doi: 10.1111 / j.1742-1241.2009.02269.x ။ pmid: 20456175 ။
Lee က SW, et al Lee က JH, Sung နာရီ, Park က HJ, Park က JK, Choi SK ကို။ ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်သည်နှင့်အညီအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်ကိုရီးယားအမျိုးသားတွေအတွက်၎င်း၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ပျံ့နှံ့။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2013; 25 (1): 12-7 ။ Doi: 10.1038 / ijir.2012.27 ။ pmid: 22931761 ။
ဟွမ်ငါယန် DO ၏ပန်းခြံ K. ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်သဘောထားများကိုအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများတစ်အခြေပြုလေ့လာမှုအတွက်အချိန်မတန်မီသုက်ဆီသို့။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Mens ကနျြးမာရေး။ 2013; 31 (1): 70-5 ။ Doi: 10.5534 / wjmh.2013.31.1.70 ။ pmid: 23658869 ။
Shaeer O. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းလိင်လေ့လာမှုစစ်တမ်း (GOSS) - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာယူနိုက်တက်စတိတ်အမေရိကန်၊ အခန်း ၃ - အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောအထီးကျန်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအကြားအချိန်မတန်မီသုတ်ရည်ခြင်း။ J Sex Med ။ 2011; 2013 (10): 7-1882 ။ Doi: 8 / jsm.10.1111 ။ pmid: 12187
Waldinger MD ။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်: အအနုပညာပြည်နယ်။ Urol Clin မြောက်မိပါတယ်။ 2007; 34 (4): 591-9, VII-VIII ။ Doi: 10.1016 / j.ucl.2007.08.011 ။ pmid: 17983899 ။
Bartoletti R ကို, Cai T က, Mondaini N ကို, Dinelli N ကို, Pinzi N ကို, အဲဒီ့ကို C, et al ။ ပျံ့နှံ့မှု, ဖြစ်ပွားမှုခန့်မှန်းချက်, အန္တရာယ်အချက်များနှင့်အီတလီမှာဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆေးရုံပြင်ပလူနာအတွက်နာတာရှည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ / နာတာရှည်တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်ကိုက်ခဲရောဂါ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ: တစ်ပေါင်းစုံပါအမှုထိန်းချုပ်ရေးစူးစမ်းလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ J ကို Urol ။ 2007; 178 (6): 2411-5; ဆွေးနွေးမှု5။ Doi: 10.1016 / j.juro.2007 ။ 08.046 ။ pmid: 17937946 ။
Screponi အီး, Carosa အီး, Di ရှတာဇီသည် SM, Pepe M က, Carruba, G, Jannini EA ၏။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်နာတာရှည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏ပျံ့နှံ့။ Urology ။ 2001; 58 (2): 198-202 ။ Doi: https://doi.org/10.1016/S0090-4295(01)01151-7 ။ pmid: 11489699 ။
Ahlenius S က, et al Larsson K ကို Svensson L ကို, Hjorth S က, Carlsson တစ်ဦးက, Lindberg P ကို။ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် 5-HT အဲဒီ receptor agonist အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုး၏ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1981; 15 (5): 785-92 ။ Doi: https://doi.org/10.1016/009 1-3057 (81) 90023-X ကို။ pmid: 6458826 ။
Waldinger MD ။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ရန် neurobiological ချဉ်းကပ်။ J ကို Urol ။ 2002; 168 (6): 2359-67 ။ Doi: 10.1097 / 01.ju.0000035599.35887.8f ။ pmid: 12441918 ။
Jern P ကို, Santtila P ကို, et al Witting K ကို Alanko K ကို Harlaar N ကို, Johansson တစ်ဦး။ အချိန်မတန်မီနှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်: ဖင်လန်အမွှာ၏လူဦးရေ-based နမူနာအတွက်မျိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med ။ 2007;4(6): 1739-49 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2007.00599.x ။ pmid: 17888070 ။
Corona, G, Jannini EA ၏, Mannucci အီး, Fisher ကအေဒီ, Lotti က F, Petrone L ကို, et al ။ ကွဲပြားခြားနားသော testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ J ကိုလိင် Med ။ 2008;5(8): 1991-8 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.00803.x ။ pmid: 18399946 ။
Podlasek, CA, Mulhall J ကို, ဒေးဗီးစ် K ကို Wingard CJ, Hannan JL, Bivalacqua တီဂျေ, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်နှင့်အလုပ်မဖြစ်အတွက် testosterone ၏အခန်းက္ပအပေါ် Translational အမြင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်တွင်။ 2016; 13 (8): 1183-98 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.06.004 ။ pmid: PMC5333763 ။
Sansone တစ်ဦးက, Romanelli က F, Jannini EA ၏, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ Lenzi အေဟျောမုနျး Correlate ။ endocrine ။ 2015; 49 (2): 333-8 ။ Doi: 10.1007 / s12020-014-0520-7 ။ pmid: 25552341 ။
Corona, G, Mannucci အီး, et al Jannini EA ၏, Lotti က F, Ricca V ကို, Monami M က။ Hypoprolactinemia: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာသစ်တစ်ခုလက်တွေ့ syndrome ရောဂါ။ J ကိုလိင် Med ။ 2009;6(5): 1457-66 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.01206.x ။ pmid: 192107 05 ။
Carani ကို C, Isidori လေး, Granata တစ်ဦးက, Carosa အီး, မဂ္ဂီကို M, Lenzi တစ်ဦးက, et al ။ အထီး hypo- နှင့် hyperthyroid လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်ပေါင်းစုံပါလေ့လာမှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2005; 90 (12): 6472-9 ။ Doi: 10.1210 / jc.2005-1135 ။ pmid: 16204360 ။
McMahon CG, Jannini EA ၏, Serefoglu EC, Hellstrom WJG ။ ဝယ်ယူအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်း၏ pathophysiology ။ Translational Andrology နှင့် Urology ။ 2016;5(4): 434-49 ။ Doi: 10.21037 / tau.2016.07.06 ။ pmid: PMC5001985 ။
Dunn KM, Croft PR စနစ်, Hackett GI ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလူဦးရေစစ်တမ်း: ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတွက်, လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏အစည်းအရုံး။ ကူးစက်ရောဂါနှင့်ရပ်ရွာကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ 1999; 53 (3): 144-8 ။ pmid: PMC1756846 ။
Hartmann ဦး, Schedlowski M က, Kruger TH ။ လျင်မြန်သောသုတ်ရည်လွှတ်အတွက်သိမှုနှင့်မိတ်ဖက်-related အချက်များ: အလုပ်မဖြစ်နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားအကြားကွဲပြားခြားနားမှု။ ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 2005; 23 (2): 93-101 ။ Doi: 10.1007 / s00345-004-0490-0 ။ pmid: 15947962 ။
El-သိကြားမင်း AI အ။ တင်ဆက်မှုမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြင်းထန်မှု: အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အနိမ့်အလိုဆန္ဒ။ Urology ။ 2008; 71 (1): 94-8 ။ Doi: 10.1016 / j.urology.2007.09.006 ။ pmid: 18242373 ။
Ciocca, G, Limoncin အီး, Mollaioli: D, et al Gravina GL, Di Sant က S, Carosa အီး။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုအတွက် psychotherapy နှင့် pharmacotherapy ပေါင်းစပ်။ Urology ၏အာရပ်ဂျာနယ်။ 2013; 11 (3): 305-12 ။ Doi: 10.1016 / j.aju.2013.04.011 ။ pmid: PMC4443008 ။
Kalejaiye အို Almekaty K ကို Blecher, G, Minhas အက်စ်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်: အသစ်နှင့်အဟောင်းသဘောတရားများကိုစိန်ခေါ်။ F1000Research ။ 2017; 6: 2084 ။ Doi: 10.12688 / f1000researc h.12150.1 ။ pmid: PMC5717471 ။
ဆီမွန်ဂျေ, ကယ်ရီအမတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ပျံ့နှံ့: သုတေသနတစ်ခုဆယ်စုနှစ်ကနေရလာဒ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2001; 30 (2): 177-219 ။ pmid: PMC2426773 ။
Parelman MA ။ သုတ်ရည်လွှတ်နှင့်စပ်လျဉ်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်မဟုတ်ရင်။ J ကို Androl ။ 2003; 24 (4): 496 ။ pmid: 12826687 ။
Corona, G, Jannini EA ၏, Lotti က F, Boddi V ကို, De Vita, G, လေးဆယ်, G, et al ။ အချိန်မတန်မီနှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်: ဟော်မုန်း milieu လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုတည်းစဉ်ဆက်နှစ်ခုကြီးစွန်း။ int J ကို Androl ။ 2011; 34 (1): 41-8 ။ Doi: 10.1111 / j.1365-2605.2010.01059.x ။ pmid: 20345874 ။
Althof SE ။ နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် / အော်ဂဇင်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2012; 24 (4): 131-6 ။ Doi: 10.1038 / ijir.2012.2 ။ pmid: 22378496 ။
Bronner, G, ဘင်-ဇိအုန်တောင်ပေါ်က IZ ။ လုလင်တို့သည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်။ J ကိုလိင် Med ။ 2014; 11 (7): 1798-806 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12501 ။ pmid: 24674621 ။
Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S နဲ့, et al ။ နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ PLoS ONE ။ 2014;9(7): e102419 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102 419 ။ pmid: PMC4094516 ။
နေရောင်ကို C, Bridges တစ်ဦးက, ဂျွန်ဆင်ဂျာ Ezzell ကို MB ။ ညစ်ညမ်းနှင့်အမျိုးသားလိင် Script: An စားသုံးမှုလေ့လာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2016; 45 (4): 983-94 ။ Doi: 10.1007 / s10508-014-0391-2 ။ pmid: 25466233 ။
ပန်းခြံ BY, Wilson က, G, et al Berger J ကို, Christman M က, Reina B က, ဆရာတော်က F ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2016;6(3): 17 ။ Doi: 10.3390 / bs6030017 ။ pmid: PMC5039517 ။
Corona, G, Ricca V ကို, Bandini အီး, Mannucci အီး, Lotti က F, Boddi V ကို, et al ။ ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2009;6(5): 1259-69 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01248.x ။ pmid: 19473282 ။
နီကယ် M က, Moleda: D, Loew T က, Rother W က, psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Pedrosa Gil အက်ဖ် Cabergoline ကုသမှု: တစ်ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2007; 19 (1): 104-7 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3901483 ။ pmid: 16728967 ။
Hackett, G, ကိုးလ် N ကို, Bhartia M က, ကနေဒီ, D, Raju J ကို long-သရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate နှင့်အတူ Wilkinson P. testosterone အစားထိုးကုထုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား၏လူဦးရေအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ vs. အရည်အသွေးကို-of ဘဝ parameters တွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကိုလိင် Med ။ 2013; 10 (6): 1612-27 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12146 ။ pmid: 23551886 ။
Jenkins LC, Mulhall JP ။ orgasm နှင့် Anorgasmia နှောင့်နှေး။ မွေးဖွားနှင့်မြုံ။ 2015; 104 (5): 1082-8 ။ Doi: 10.1016 / j.fertnstert.2015.09.029 ။ pmid: PMC4816679 ။